Ukulunywa ku perineum - Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Ukulunywa ku perineum - into lalivamile. Ngokwezibalo, cishe ngo-65% wabantu mathupha ngezikhathi ezithile, futhi ngo-15%, wathuthela kwifomu ezingamahlalakhona. Uma-ke iyathinteka, futhi ungakhathazeki. Phela, kungenziwa ngokushesha iqedwe.
Ngokuyinhloko, kubantu abaphethwe izimpawu ezifana ukulunywa ku ukuxhuma, hhayi kakhulu ukubukela inhlanzeko yabo siqu. umjuluko zanqwabelana futhi zisekela microflora ukukhululwa ifomu ezihlukahlukene amagciwane athile kanye nesikhunta. Inikeza ngokuphazamisa ekhethekile, uma isikhumba sakho ku perineum esishwabene noma inoboya kakhulu.
Ukusebenzisa ezinzima toilet paper, wena kuphela siba sibi isimo sabo. Phela, ngaleyo ndlela wena yakha phezu kwesikhumba eziningi amanxeba bangaba avuvukele.
Enye imbangela kunokwenzeka le ukulunywa bangaba okokugqoka zokwenziwa zangaphansi, okuyinto kakhulu engathandeki yimuphi umuntu. Lokhu nelineni akuyona "ukuphefumula", yingakho kukhona umswakama ekuqongeleleni ku ukuxhuma.
Uma uthatha amaphilisi noma hormone ezahlukene steroid iqala ukuba buthaka amasosha ethu omzimba, esithinta ngqo ukumelana yesikhumba.
Izimpawu eyinhloko ukulunywa ku perineum
Isimanga siwukuthi kodwa ukuluma ku perineum kuwuphawu izifo eziningi ezinkulu. Lokhu kungaba utwayi, isipatsholo, ngisho nesifo sikashukela. Uma hygienically wena kulungile, futhi ukulunywa akuvimbi, kufanele ngokushesha kudokotela.
perineum ukulunywa iyona uphawu esiyinhloko hemorrhoids, kucabanga helminthic noma ukuxhuma fistula. Lezi zifo zingakwazi ukuthi zelashwe.
Kodwa u-70% ukuvakashela eyinhloko onekhono ekwakhiweni sitholakele izimpawu ezinjalo kuba "idiopathic pruritus ingquza." Lokhu kusho ukuthi imbangela ukuluma ayitholakali.
Ukulunywa ku perineum kwabesifazane
It ngokuvamile uhlanganiswa izifo sangasese (ngokukhethekile, lezinkinobho), izifo ezidluliselwa ngobulili ngokuthintana ngocansi, nezinye pathologies. Uma kukhona ngokwahlukana, bangakwazi obungamcasula isikhumba futhi kubangele ukulunywa. Lezi zimpawu ezibuhlungu kungase kwenzeke ngemuva egqoke thong yathanda abesifazane abaningi, ikakhulu kusukela zokwenziwa izinto.
Ukulunywa ku perineum ezingabantu
Lokhu uphawu sabantu besilisa kuyinto evelele ehlobo, lapho ukushisa kanye ngokweqile umzimba izinwele obulimaza isikhumba kule ndawo. Ukulunywa kungenzeka uma kukhona nezilonda noma izifo ezithile emzimbeni wawa.
Izindlela eziyinhloko yokwelashwa
Ungakwazi uxhumane nodokotela wakho ukuze uhlobo oluthile lokwelashwa, noma nje benze ezinye imithetho elula.
Udokotela linqume ababuthakathaka (ngephesenti elilodwa) hydrocortisone wamafutha. Kufanele isetshenziselwe ngeviki elilodwa bese sisebenzise ungqimba elincanyana endaweni elikhanyayo 3-4 izikhathi ngosuku. It is nhlobo nokusebenzisa kusho usuku eside ngenxa noma ukwandisa imvamisa kwesicelo! Phela, kuyinto imithi sasivumela okunamandla nendlela abalisebenzisa ngokweqile kungabangela ukusha amakhemikhali perineum.
Ukuqeda ukuvuvukala ukulunywa ku ukuxhuma, futhi inikezwa "imishini uketshezi" (aluminium acetate elangeni).
Futhi ekupheleni imithetho embalwa. Okokuqala, njalo ukubukela uhlanzekile. Ushawa okungenani kanye njalo kwezinsuku ezimbili. Gcina perineum. Kodwa akufanele zihlukunyezwa kakhulu insipho imoto. Ziqukethe yabahlanzi namanye amakhemikhali kungaba inogoda uma idliwe njalo ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu okunzima isikhumba kakade abavusa. Okwesibili, ukuthi kunesidingo esiphuthumayo ukushintsha iphepha yangasese. Thenga ambalwa emiqingweni ezithambile iphepha neriflonoy. Okwesithathu, udinga ukushintsha izingubo zangaphansi yakho phezu ephansi ukotini zokwenziwa kumbe selembu elicolekileyo. Ekhaya, zama ukugqoka izikhindi okuxekethile noma umjuluko ibhulukwe esikhundleni jeans intandokazi yakho.
Konke lokhu imithetho elula kuzokusiza ukuhlukana ngokwakho yalesi sifo. Ngikufisela inhlahla!
Sepsis - izimpawu futhi amagciwane
Larsen Syndrome: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Iziyaluyalu Extrapyramidal: ekwelapheni locomotor umsebenzi iziyaluyalu
Kungani ngokweqile belly fat obulalayo?
Indlela yokusebenzisa Petstsera ipayipi futhi ipayipi subclavian?
Umuthi 'Anaferon ": Izibuyekezo kanye nezincomo
"Limfomiozot" lisho ukuthini. imfundo
Indlela nika bese usebenzisa ihange-HTML?
Umsebenzi Epochal - "The epholile Don". Abalingisi kanye izindima